Khansaa, haweenaydii 40 sanadood u baroordiiqaysay Walaalkeed, Maxaa badalay ..? | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Khansaa, haweenaydii 40 sanadood u baroordiiqaysay Walaalkeed, Maxaa badalay ..?
Published: December 7, 2016, 4:55 pm
(0) Comments TAARIIKHDA ALKHANSAA: AKHRISO
Al-khansaa, waxay kasoo jeedaa qoys carabta magac iyo sharaf ku dhex lahaa, waxayna ku barbaartay guri lagu majeerto geesinimada iyo deeqsinimadaba. Waxay la noolayd aabaheed, walaaladeed Sakhar iyo Mucaawiya, waxayna labada wiil ahaayeen kuwo naftood hurayaal ah sida ay ku sheegayso gabayada ay tiriso. Al-Khansaa waxa soo doonay nin madax u ahaa qabiilka reer Jushum waa Durayd ibnu Al-samtah, kadibna Al-khansaa way diiday ninkaas guurkiisa ayadoo ka doorbiday wiil ay ilmo adeer yihiin.
Dabadeedna waxay guursatay inaadeerkeed Rawaaxa ibnu Cabdulcuza Al-sulami waxayna u dhashay hal wiil hase ahaatee ninka qaba ayey ku eedaysay inuu ahaa nin ku cayaara xoolaha, ugu danbeyna way kala tageen oo waxay guursatay nin kale oo ay ilmo adeer yihiin Murdaas ibnu Caamir al-sulami, ayadoo u dhashay afar wiil.
Al-Khansaa waxay ku caanbaxday gabayo suugaaneed oo baroor diiq ahaa oo ay u tiri jirtay labadeedii walaa Sakhar iyo Mucaawiya. Carabtii xilligaa noolayd aqoon badan ayey u lahaayeen haweenaydan Al-Khansaa. Tusaale ahaan markii Dagaalkii Badar uu dhacay waxa la dilay Cutbah, Shaybah iyo Waliid ibnu Cutbah oo sadexdaasba waxay isku qoys yihiin hinda bintu Cutbah, waliid walaalkeed ayuu ahaa, Cutabana aabaheed iyo Shaybah oo adeerkeed ahaa. Dabadeedna Hinda waxay u baroordiiqday musiibada soo gaadhay ayadoo la barbardhigtay dhibta soo gaadhay tii asiibtay Al-khanaa.
Wuxuu sheegay Ibnu Cabdulbarri: Al-khansaa waxa la islaamtay qoomkeedii reer bani Suleym, waxaana la sheegaa inuu Nabigu (s.c.w) ka dalbay inay gabaydo oo uu la cajabay gabaydeedii. Al-khansaa waxay ahayd ruug cadaa soo gaadhay xilligii jaahiliga ee islaamka kahor iyo xilligu islaamku soo ifbaxayba, wayna islaamtay oo ay wanaagsanaatay islaamnimadeedu. 
« Warbixinta Ka HoreysayQisadii Odayga iyo wiilkii Yahuudiga ahaa ee ku islaamay xabad nacnac ah!!	Warbixinta Xigto »Qiso Yar oo Ina Dareensiineysa Hadii Aan Qayaano Sameyno Welwelkeeda Inan Dhaxleyno..!!	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Leave a Reply Cancel reply